Corel Draw အသုံးပြုနည်း (မြန်မာ)
ကဲ မလုပ်တတ်တဲ့သူများ ကြည်ပြီးတော့ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ. အားလုံး အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ် . software ကတော့ တင်ထားပြီးသားထင်တယ် မတင်ရသေးဘူး ဆိုလဲ ပြန်တင်ပေးပါ့မယ် .
Download ifile.it | Megashare | Zhare | Ziddu | Megaupload